Sidee baad ka iPhone Bedelka Faylal ay si Android / macruufka / Symbian
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPhone in Android / macruufka / Symbian
Waxaa iman doona wakhti marka aad rabto in aad nuqul ka files ka iPhone ka dib markii aad ka iibsan phone kale ama kiniin ah, nasiib daro, waxaad kaliya ma fikrad fiican leeyihiin. Sidaas, waxa ay u muuqataa in aad in dhaqaaqin files oo ay ku jiraan xiriiro, fariimaha qoraalka ah iyo sawiro off iPhone waa shaqo culaab badan.
Hadda, waxaa war fiican ah in aadan u baahan tahay in aad dhibaato ku saabsan. Halkan ayaan ugu faraxsanahay quruxsan in aad ku talin mid-click qalab kala iibsiga phone waxtar leh oo wax ku ool ah, ahay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxaa si gaar ah loogu tala galay inuu kaa caawiyo inaad ku wareejiso xogta, kuwaas oo music, sawiro, videos, xiriirada, jadwalka iyo farriimo ay ka mid yihiin kuwa group ka iPhone si ay Android ah. Haddii aad leedahay xiriir in xisaab-aad, sida iCloud, Exchange, MobileTrans sidoo kale iyaga ku wareejin doonaan si ay telefoonka aad Android.
Files kala iibsiga ka iPhone in Android in 3 tallaabo
Download MobileTrans oo raac talaabooyinka soo socda. halkan, waxaan jeclaan lahaa in ay qaataan version Windows sida tusaale. The version Mac ha uusan kuu soo gudbin file kasta ama ka Nokia (Symbian) telefoonka.
Tallaabada 1. Ku rakib MobileTrans iyo waxa maamula
Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa si loo soo dajiyo iyo ordi this phone qalab kala iibsiga on your computer. Markaas, furmo suuqa hoose u muuqataa. Dooro Phone in ay hab Transfer Phone oo guji Start .
Fiiro gaar ah: Si aad u samayn iibsiga file iPhone, ugu horreeya oo dhan, oo aad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood on your computer. Haddii aan, MobileTrans sii dayn doonaa inaad u soo dajiyo.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone iyo Android phone in kombiyuutarka
Ka dib markii in, ku xidhi aad iPhone iyo Android phone in qalab hal-click kala iibsiga telefoonka waqti isku mid ah. MobileTrans Toos ah lagu ogaan doonaa qalab aad mar ay ku xiran tahay. Iyo xeesha muuqan doona meelaha of "Source" iyo "Destination" si gooni gooni ah.
Waxaad sax karaa "data Clear hor nuqul" marka aad qorshaynaysid in aad u faaruqiso telefoonka aad Android si loo badbaadiyo files ka iPhone.
Fiiro Gaar ah: Tani waxay taageertaa software iPhone socda macruufka 9/8/7/6/5, oo ay ku jiraan 6s iPhone (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, 5c iPhone oo dheeraad ah. Qalabka Android socda Android 2.1 iyo ka dib si fiican u taageeray.
Fiiro Gaar ah: Waxaa laguu oggol yahay in la beddelo meelo ka mid ah laba qalabka adigoo gujinaya "Flip", marka aad u baahan tahay.
Tallaabada 3. dhaqaaq files ka iPhone in phone Android
Sida aad arki karto, waxaa laguu ogolyahay in lagu wareejiyo xiriirada, jadwalka taariikhda, qoraalka fariimaha, sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow. Guji Start Copy si ay u gudbiyaan files. Ka dhig labada qalabka aad ku xiran yihiin inta lagu jiro hanaanka wareejinta. Marka uu dhamaado, riix OK ay joojiyaan.
Waxaad u sameeyey! Waa wax fudud, soo maaha? Hadda, isticmaali MobileTrans si aad u hesho files off iPhone